Wararka Maanta: Isniin, Oct 29, 2012-PROF. JAWAARI: "Howlaha ugu badan ee baarlamaanku qabanayo afarta sano ee soo socota waa la xisaabtanka Xukuumadda"
PROF. JAWAARI: "Howlaha ugu badan ee baarlamaanku qabanayo afarta sano ee soo socota waa la xisaabtanka Xukuumadda" Isniin, Oktoobar 29, 2012 (HOL) — Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Prof. Maxamed Cismaan Jawaari ayaa sheegay in howlaha ugu badan ee baarlamaanku uu qaban doono afarta sano ee soo socota ay noqonayso la xisaabtanka xukuumadda.Prof. Jawaari wuxuu sheegay in sidoo kale uu baarlamaanku ka tashan doono waxa la gudboon marka uu xilkoodu dhammaado, isagoo sheegay in qorshayaashan oo dhan ay ku xusan yihiin qorshe howleedka baarlamaanka uu dagsaday afarta sano ee uu shaqeynayo."Howsha ugu culus ee baarlamaanka waxay noqon doontaa kormeeridda iyo sidii la xisaabtan loogu sameyn lahaa wasaaradaha dowladda," ayuu yiri Prof. Jawaari oo intaas ku daray in wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda lala xisaabtami doono saddexdii biloodba mar.Sidoo kale, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in baarlamaanku uu yahay mid ku hadlaya afka shacabka, isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ku kalsoondaan baarlamaanka, maadaama uu iyaga matalo."Wasaarad walba waxaa la weydiin doonaa howlaha u furay, kuwii aan fulin sababta keentay inay fuli waayaan iyo xilliga la fulinayo," ayuu yiri Prof. Jawaari oo intaas ku daray in baarlaamanka ay ka go'an tahay inuu howlihiisa kasoo baxo.Ugu dambeyn, Prof. Jawaari wuxuu sheegay in sidoo kale uu baarlmaanku dib u eegis ku sameyn doono dastuurka dalka oo horay loo ansixiyay, isagoo xusay in wax ka bedel lagu sameyn doono dhammaan qodobbada uu muranka ka taagan yahay, laguna caddeyn dono in Muqdisho ay tahay caasimadda Soomaaliya.Hadalka guddoomiyaha baarlamaanka Somalia ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo lagu wado in dhawaan lasoo dhiso xukuumad iyo iyadoo xildhibaanadu ay maalmihii lasoo dhaafay ka shaqeynayeen qorhshe howleedkooda afarta sano ee soo socota.
Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug ee Puntland ayaa maanta magaalada Gaalkacayo kusoo bandhigay lacag been abuur ah oo isugu jirtey Dollar iyo Shilin Soomaali. Al-shabaab oo ku hanjabtay inay Qaraxyo Aargudasho ah ka geysan doono Gudaha Dalka Kenya 10/29/2012 6:27 AM EST
Isniin, Oktoobar 29, 2012 (HOL) — Xarakada Al-shabaab ayaa ku hanjabtay inay ka gudaha dalka Kenya ka geysan doono qaraxyo aargudasho ah, iyadoo xustay inay go'aansatay in Kenya ay ka shalaydo go'aankii ay ku gaartay inay gudaha u soo gasho dalka Soomaaliya. Maamulka Gobolka Banaadir oo sheegay inay soo gabgabeeyeen Tirakoobka Dadka ku nool Shan degmo oo Muqdisho ka tirsan 10/29/2012 4:13 AM EST
Isniin, Oktoobar 29, 2012 (HOL) —Danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya Dalka Kenya Max’ed Cali Ameeriko ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ee u safra dalka Kenya ay qabaan dhibaatooyin, isagoona sheegay in diyaaradaha ka yimaada Soomaaliya la mariyo baaritanno xad dhaaf ah. Madaxweynaha Puntland oo ka hadalay dagaallada Al-shabaab lagula jiro, sheegayna inay wafdi u dirayaan Kismaayo 10/29/2012 3:11 AM EST